Ny fototra ara-panahy ny olona fikatsahana | Apg29
Ny fototra ara-panahy ny olona fikatsahana
Of Sigvard Sabatra
Raha ny manantena soratra ara-paminaniana io, dia nataony fanoharan'i Jesosy momba "ny very / återvunne zanany" (Lioka 15) toy ny tandindon-javatra fototra, ny afterimage tamin'ny taonjato teo aloha-zava-nitranga taloha.
Fa ianao koa dia afaka mampihemotra izany manodidina ka lazao hoe: fa izaho koa dia manana fironana fanoharana miorina amin'ny fotoana Jesosy nanolotra azy io ho modely ho an'ny zava-nitranga avy eo atsy ho atsy. Tsy maintsy ao an-tsaina foana fotsiny fa ny fanoharana rehetra dia tsy feno. Tsy manana na inona na inona, ary mety hitarika ho bebe kokoa noho ny fotoana dian-tongotra izany. Ary raha ny fanontaniana ao amin'ny Baiboly / tenin'Andriamanitra amin'ny soratra ara-paminaniana ireo mavesatra sy mivoaka, ka midina, teo ary eny ao amin'ny boky 66. Noho izany, mba hamaky ny Baiboly, ao amin'ny Fanahy Masina ny fanosorana no azo antoka indrindra fomba tonga amin'ny fahatakarana ny soratra masina, araka ny Fanahy no mahavelona ny taratasy sy ny teny milentika. (2 Kor 3: 6)
Araka ny lahatsoratra mikasika ny Fahalavoana nadika hoe ny anjely ao amin'ny "förhimmelska" sy ny mitovy tao amin'ny Sahan'i Edena ny olona. Fa manamafy ihany koa ny famonjena ny olona amin'ny alalan'i Jesosy ny famelana ny fahotana, indrindra ny fanavotana ho toy ny hiverina "an-trano" ho an'Andriamanitra. Chapter lohatenin'ny for Lioka 15: 11Ary ny andininy handroso, arakaraka ny fandikan-teny isan-karazany nomena hevitra nandritra ny taonjato maro. Ny fanoharana dia azo antsoina hoe: "ilay zanaka adala", ary koa fa "ilay zanaka adala". Ny toko fizarana, 1, 2, 3, sns, nony taorian'ny 1228 vao amin'izao androntsika izao - ny alalan 'ny teny Anglisy Stephen teolojianina ny fiahian'ny Lang. Ny boky sora-tanana amin'ny Baiboly, na metered sasin-tenin'ny toko sy ny andininy amin'ny fisaratsarahana.
Izany dia ny Baiboly lalina antony mahatonga ny ny ara-panahy / fikatsahana ara-pivavahana eo amin'ny olona. Tany am-boalohany, ilay lehilahy (1 Genesisy 1-2) tena mpikatsaka ny maha-Andriamanitra, satria ny mpivady olombelona voalohany, i Adama sy Eva niaina tao amin'ny tsy manan-tsiny sy ny hita fifandraisana amin'Andriamanitra ny Mpamorona azy eo amin'ny ara-batana Sahan'i Edena masina - misaraka sy miavaka anatin 'ny fanjakan' Andriamanitra manan-danja fa amin'ny voninahitra selestialy. I Adama sy Eva, ary afaka nihinana ny hazo rehetra eo amin'ny saha, ao anatin'izany ny "hazon'aina", fa ny hazo fahalalana "ny tsara sy ny ratsy", Andriamanitra efa noraran'ny aminy hihinana sy tsy nanao na dia mikasika. Raha nihinana ny hazo izy ireo fa ho faty batana na ara-panahy sy ny heviny; "Fahafatesana maty" (1 Gen. 2:16); ho faty "fahafatesana faharoa" (21: 8).
Tsy nitady sy tsy dia ara-panahy / ara-pivavahana avy amin'ny tari-dalana, na avy tamin'i Adama sy Eva Andriamanitra na lafiny ho avy amin'ny lafiny azy ireo, izay tsy ilaina amin 'izany izy ireo niara-tao amin'ny saha. Ny finoana ny azy ireo dia mitovy ny matoky ny Mpamorona noho ny fikarakarana sy ny akaiky azy. Foronina niteny izy, amin'ny zava-dehibe toy izany koa toy ny amin'ny fianakaviana tsara fifandraisana. Fantatrao aiza misy anao. Misaina ny fanoharana tanjona ny fomba "ny very / zanaka adala" Raha fony izy tsy mbola niala an-trano. Any, ao an-tokantrano tontolo iainana, dia nanana ny fiarovana rehetra nanana ray mendrika mafana fiombonana, tsara ny sakafo, akanjo tsara tarehy, be dia be ny fahafahana sy ny rivotra madio. Na izany aza, fananana lova izay nandry miandry azy ho avy Toa nanomboka mba hisarihana azy. Mihitsy aza izy ireo "voarara" ny vola, dia fakam-panahy mafy. Tezitra, angamba miahiahy ny zokiny, tiany ho tanteraka nesorina ny fahalalahana hiaina ny "izao tontolo izao" ivelany, ary mba hanatratra lehibe kokoa "fahombiazana" noho ny any an-trano ny toeram-pambolena. Mety, dia mieboebo ary hiavonavona ho any izany no fikasako. Fahalavoana izay azo lazaina aminy, dia satria izy no "mialoha" niantso ny ampahany amin'ny mpiray "zanaky ny lova" 'ny Ray - izay nandefa ny zandriny ny safidy malalaka hijoro: "Ray ô, omeo ahy ny anjara ny toetra. Dia nozarainy ny fananany teo amin'izy ireo. Fotoana fohy taorian'ny zandriny nangorona ny rehetra ka nandeha lavitra ho any amin'izay tany hafa. " omeo ahy ny anjara ny toetra. Dia nozarainy ny fananany teo amin'izy ireo. Fotoana fohy taorian'ny zandriny nangorona ny rehetra ka nandeha lavitra ho any amin'izay tany hafa. " omeo ahy ny anjara ny toetra. Dia nozarainy ny fananany teo amin'izy ireo. Fotoana fohy taorian'ny zandriny nangorona ny rehetra ka nandeha lavitra ho any amin'izay tany hafa. "
Latsaka tao amin'ny Sahan'i
Miverena any amin'ny zaridainan'i Edena, ary ny fahalavoana tao (Nomery 3 1). Rehefa ny mpivady latsaka noho ny tenin'i Mpaka fanahy, nangalany ny vokatry ny voankazo voarara izy ka nihinana, mba 'ho tahaka an'Andriamanitra hianareo, hahalala ny tsara sy ny ratsy, "dia nanao ny voalohany foronina sarobidy heloka bevava an' Andriamanitra. Iza kosa dia midika fa, mba hampiasa ny sary an'ohatra ny olona elanelana hay resena na rindrina niainga tafiditry ny fahavalo eo aminy sy Andriamanitra. Olombelona very noho ny fitondran-tena tsy azo ekena; ny dingana maditra, na ny fifandraisana mirindra amin'Andriamanitra - ka tonga teo amin'ny ilany ny fiaramanidina azy ho toy ny olombelona ara-potoana sy ny fanomezana hery aminy. A "afa-jaza", ny "fisaraham-panambadiana" amin'ny - toy ny nitranga - azon voka-dratsy ho an'ny olombelona.
Ny fiantraikany tapaka i Adama sy Eva na ny fanahy, saina sy ny vatana. Ny zava-drehetra tao an-heviny nanakorontana faty ilay mpamaly ra, tabataba sy ny farofy. Ny teny hebreo hoe Chat (mifanaraka teny amin'ny teny grika hoe hamartia), ny ota tao soedoà, namely tamin'ny kery tanteraka tsara ho olombelona. Samy etika (avy amin'ny teny grika. Bita, teorika fisaintsainana) sy ny toe-tsain'ny (ny lat. Fitondran-tena, toy ny asa) - (etika dia azo antsoina hoe fitondran-tena anatiny kompà) - nandray ny "fahavoazana", ny fahazaran-dratsy, fiankinan-doha, ny fanararaotana, izay tsy hanasitrana ny tenany. Pain, akanjo sy ny fanoherana fa amin'ny lafiny maro ho be olona. Ny fako no nanao ny zavaboary rehetra, ary triatra ary sarotra "vay" sy ny "fery". Ny rivotra vibrated amin'ny lainga, fitaka, loza, heloka, fanahiana, mpangataka, adin-tsaina, fanoherana, lavitra, manirery, demonia sy ny fahababoana. Fehiny dia fanandevozana "ny kolikoly"
Fotoana toy ny hoe - in noho ny fanamboarana - oharina amin'ny "ny very / zanaka adala" ratsy traikefa sy ny mahantra fanapahan-kevitra ao amin'ny "firenena any ivelany". Fiainana ao amin'ny vaovao, dia azo antoka fa nanomboka teo - izay azo an-tsaina ny: a mahafinaritra, mahafinaritra, tsara tarehy sy fomba mpiavonavona. Saingy toa izany, fa tsy naharitra ela: "Tsy Izy, dia nitondra ny nandanilany foana tsy voafehy ny fiainana sy ny fananany rehetra." Ny manaraka "mosary", miaraka amin'ny fanavakavahana ara-tsosialy, izay nanery azy hanao ny fanompoana momba ny kisoa tompony. Ny kisoa tsy maintsy mpiambina sy ho velona eo, dia afaka na dia ny demonia Manondro asa. Hoy ny Baiboly, ohatra ao amin'ny Marka 5: 12-13 mikasika ny fomba ny fanahy ratsy naniry ny handeha ho any amin'ny kisoa andiany ireo akaiky i Jesosy Te handroaka azy hiala tamin-dralehilahy izy ireo ny fananany. A faniriana Jesosy, fa koa voazaha toetra, toy ny fanahy an'ny kisoa. Izy ireo mazava ho azy ny toerana maro ao amin'ny Baiboly izay mampiseho kisoa sy ny kisoa ny fitondran-tena, mba hamaritana ny loto eo amin'ny lafiny ara-panahy. Ny fofona Toa lavitra.
Ny lisitry ny fahotana
Rehefa ny mpivady nianjera ny "Menarana" fakam-panahy, dia tonga ka isika ao amin'ny taranaka taorian'ny nafatotra, mitondra ary nihaona ny fakam-panahy nitady. Ohatra, ny avonavona, ny fitsiriritana, fandokafana, lainga, manafina, mandainga, mangidy, famitahana, ny fanalàm-baraka, hedonism, ratsy fitondran-tena, ara-dalàna, sy ny hery famoretana, ratsy fanahy sy ny asan'ny maizina. Izany dia nafangaro teo amin'ny fikarohana noho ny famoizana 'Andriamanitra sy ny Paradisa very. Ny fifandraisana dia "tsy misy fanantenana sady tsy nanana an'Andriamanitra teo amin'izao tontolo izao." (Efesianina 2:12) Asehon'ny Baiboly fa maro ny toerana eo amin'ny asa tanterahana amin'ny alalan'ny olona noho ny Fahalavoana, ary ny teny iray be be halyard toetra mampiavaka ny vokatry ny vokany. Ao amin'ny Galatiana 5: 19-21, ny atonta ao amin'ny lisitra endrika: "asan'ny nofo dia miharihary: fijangajangana, fahalotoana, fanaranam-po, ny fanompoan-tsampy, ny asan'ny maizina, fankahalana, fifandirana, fialonana, fipoahan'ny fahatezerana fahatezerana, själiskhet, ho fisaraham-bazana, fitokoana, lolompo, fahamamoana, lanonana feno filibana, ary ny toy izany. Lazaiko aminareo mialoha izay efa niteny hoe: ireo izay manao izany dia tsy handova ny fanjakan'Andriamanitra. "
Romana 1: 29-32 cataloging: "Efa ho feno ny tsi-fahamarinana rehetra, ny faharatsiana, ny fitiavan-karena, ary ny lolompo, dia feno fialonana, vonoan-olona, ​​fifandirana, fitaka sy ny lolompo. Ny fifosana sy ny fanendrikendrehana, dia mankahala an'Andriamanitra sy ny herisetra. Ny declaims sy ny mirehareha, dia fomba mahavariana amin'ny ratsy sy ny tsy manoa ray aman-dreny, adala, tsy manam-pinoana, tsy manam-pitiavana sy mafy fo. Izy ireo no mahafantatra tsara ny marina ny didy fa ireo izay manao toy izany mendrika fahafatesana. Nefa manao izany, ary izy ireo koa dia manaiky fa ny hafa manao izany. "Koa mafy sy fanantenana ratsy ny teo, fa dia ratsy va izany, miorina amin'ny Adama sy Eva ny lavo hiala amin'ny fahasoavana tao amin'ny Sahan'i Edena - alaim-panahy hamaky toy mby teo akaikin'ny menarana. Ahoana lavitra ilay foto-kevitra ho any, dia mbola te-hanao ny fanitarana, ho any amin'ny ara-baiboly finoana kristianina, misy toerana ho an'ny olombelona kileman'ireo ny mpino, amin'ny heviny hoe ny Mpisoronabe, Jesosy,
Menarana Tao PARADISA
Iza ilay menarana izay namitaka an'i Adama sy Eva ao amin'ny Paradisa? - Eny ary, dia isika hiverina ho any amin'ny fisehoan-javatra izay mialoha "famantaranandro ny fotoana" izay nitranga ny sasany totohondriny any an-danitra. Ao amin'ny Isaia 14 sy Ezekiela 28, nanao ny anankiray ho eo amin'ny-pervading sy miramirana anjely latsaka hanota ary mitsangana ka mamely Andriamanitra. Izao no voalaza, ankoatra ny zavatra hafa ny mamaky fa ny ampongatapaka sy ny sodina dia voaravaka "volamena". Fa tsy afa-po amin'ny ny toerany maha lehiben'ny "mpiaro" ny any an-danitra, fa te ho ambony kokoa ny megalomaniac eo amin'ny fitondrana - mandra-mipetraka ho Mpanjaka amin'ny "gudaförsamlingens tendrombohitra". Inona no ho lavo hiala amin'ny fahasoavana mety hitranga any an-danitra ao amin'ny Baiboly dia manome antsika tsy namaly. Fa dia mandoto ny tontolo selestialy masina - ny fomba hafahafa sy saro-pantarina araka ny mety ho toa - izay mila haverina amin'ny alalan'ny fitsaboana Jesosy handatsaka ra-na sorona,
Anjely izao tontolo izao dia voasarika ho any na dia nanana afaka hifidy eo aminy sy Andriamanitra. Ary avy eo dia hita fa ny ampahatelon'ny eny amin'ny lanitra nifidy ny hijanona eo ny fahavalony (Apok 12: 4). Alohan'ny egofulle kerobima heloka bevava an 'Andriamanitra, dia tsy nisy fifaninanana na bao roa mba handray ny fanapahan-kevitra amim-pinoana. Ny finoana dia tsy misy ho toy ny toe-javatra. Ny Ray, ny Zanaka ary ny anjely dia niray toerana amin'ny fahamasinana sy ny voninahitra tsy misy asa manokana amin'ny tsirairay eo amin'izy ireo. Ary tsy nisy na inona na inona, na manohitra ny fonenana masina. Tsia, ny any an-danitra dia tsy misy fifandraisana ny zavatra azo lazaina hoe ara-panahy na ny fivavahana. Tsy misy mpangataka for, na rehefa afaka indray na ny hafa dia ho amin'ny daty.
Fa mitaky ny fireharehana heloka bevava an'i Losifera. Noho izany, ny modely ny fahalavoana tao amin'ny Sahan'i Edena "namorona" ilay naka fanahy an'i Adama sy Eva - dia toy izany no fahotana archetype. Ny zavatra niavaka tamin'i Adama sy Eva ao an-tsainy ny efitra, ary tonga ny olombelona ho samy hafa toetra ny fahotana rehefa afaka izany, - no loha laharana amin'izany ny tapa-mpanjaka ny anjely i Losifera. Tao amin'ny saha dia toy izany ny dika mitovy ny zavatra izay nitranga teo aloha, toy ny fitaratra sary. Ankoatra izany, i Jesosy dia aseho toy izao manaraka izao ao amin'ny Jaona 10:10 ny fahavalo: "Ny mpangalatra tsy avy raha tsy hangalatra sy hamono ary handringana." Androany dia ny fanalan-jaza, firaisana ara-nofo fiovana sy ny euthanasie dia hoe zon'olombelona asa atao ao amin'ny siansa ara-pitsaboana sy ny maha olona: anarana, amin'ny ezaka mba hitaona ny fampandrosoana, mba interacts notendrena amin'ny anaran'ny "evolisiona". Ny / matanjaka indrindra amin'ny fandraisana Fandresena.
Ary izany dia mety ho mifatotra ao amin'ny zavatra nolazain'i Jesosy ao amin'ny Jaona 8:44 momba Fien-on: "Izy dia mpamono olona hatramin'ny taloha, ary tsy mbola nijanona teo an-fahamarinana si-da, satria tsy misy marina aminy. Rehefa mandainga izy, dia miteny ivelan'ny tenany, satria mpandainga izy sady rain'ny lainga. "Ao amin'ny 1 Jaona 3: 8 hoe:" ny devoly manota hatramin'ny voalohany. " Ny mpamaky dia tsy tokony mampiasa andinin-teny isan-karazany ny Baiboly, mba hahitana ny fomba ny zava-ho "mpitondra fahazavana," ny kerobima mamiratra eo amin'ny anjely rehetra any an-danitra manan'aina izao tontolo izao, dia mety ho feno fahotana Tamin'ny eritreritra sy ny atao - ohatra toy ny famonoana olona sy ny lainga. Afaka mieritreritra izany ary mihazona ireo lahateny amin'ny teny sy nanoratra ny momba azy io. Nefa tsy haminavina izany wildly fa mitarika ho mifanohitra amin'ny Baiboly ny fahanginan'ny ny foto-kevitra.
antony lehibe indrindra mahatonga
Antony lehibe indrindra mahatonga ny menarana, no naka fanahy an'i Adama sy Eva hanota - samy efa hamaly faty noho ny Losifera dia omena ny mahery voninahitry ny Andriamanitra, ary tezitra izy hariana any ivelany ka nidina avy tao an-danitra, noho ny fikomiany. Izay midika fa toa nandalo fiovana / ozona ho "menarana". Fa mieritreritra izany koa amin'ny anarana maro va ny matsatso, sy ny foto-kevitra momba ny Baiboly, toy ny manolotra azy: dragona, i Satana Devoly, Belzeboba, leviatana, fahavalo, fahavalo, mpanohitra, ny amboadia sy ny vahiny. Anarana vaovao no namorona ao amin'ny asan'ny maizina isan-karazany sy ny fiaraha-monina ara-pivavahana-anganon'ireo hatramin'izay. Ohatra: Mardoka, Zeosy, Samhain, Ahriman, ny kisoa, henatra, ny devoly sy ny devoly.
Noho ny menarana nankahala ny zavatra rehetra izay noforoniny tamin'ny nanaovany azy. Mazava ho anjely lohan'ny Michael. Michael ejecting nitondra azy tany an-danitra: "Ary nisy ady tany an-danitra: Mikaela sy ny anjeliny niady tamin'ilay dragona. Ary ilay dragona sy ny anjeliny niady, nefa tsy ampy ny mahery, ary tsy nisy intsony toerana ho azy ireo any an-danitra "(Apokalypsy 12: 7-8). Ny menarana nankahala ny saha sy ny mpivady, mazava ho azy. Fa indrindra indrindra, dia entin'ny fahasarotam-piaro ny Zanaka, ary efa nanao azy ny hatiske fahavalo sy ny fahavalo. Mety ho tsapany eto sahady fa hisy fivoriana vaovao amin'ny Zanak 'Andriamanitra amin'ny farany, faharesena kokoa amin'ny tvekamper kokoa. Izahay mipetraka amin'ny hindsight mihevitra anisan'izany ny very, fony izy nanolotra ny tenany ho naka fanahy an'i Jesosy tany an-efitra. Apokalypsy 13: 8 manome antsika 'i Jesoa (oh: Hedegårds fandikan-teny): "Ny Zanak'ondry, izay voavono hatramin'ny nanorenana izao tontolo izao". Eto isika dia manana soratra toy izany koa ny Apokalypsy, fa amin'ny fomba fijery mahatalanjona eo: Amin'ny lafiny iray toy izao: Ny devoly no "mpamono olona" hatrany am-piandohana, mpanota "hatrany am-piandohana". Etsy an-danin'izany, rehefa ho zanak'Andriamanitra, no voalefona "hatry ny fanorenana izao tontolo izao".
Ary koa, isika maka azy Ho mora ny heviny ny andininy ireo, rehefa nisaintsaina ny amin'ny lafiny rehetra, na ny fotoana, izay mihatra ny teny hoe "voalohany", "hatrany am-piandohana", "hatry ny fanorenana izao tontolo izao". Mety ho toy izany momba ny fotoana iray ny namoronana ny tany, dia tsy mbola nisy, na misy ifandraisany amin'ny toe-draharaha tao amin'ny tany sy ny ara-batana famoronana ny Paradisa. Fa azo antoka tsara tarehy dia ny "famonoana" raharaha 'ny faminaniana, dia tsy hita maso tanteraka, fa teo amin'ny hazo fijaliana ny Kalvary hita tanteraka. Na izany na ao amin'ny 1 Gen 3:15 Andriamanitra mampitoetra Menarana miatrika ny zava-misy tsy mivoaka: "Izy (ny zanako) hanorotoro ny lohanao, ary ianao kosa hamely ny ombelahin-tongony." Ao amin'ny Apokalypsy 12:12 dia mivaky toy izao: "Mifalia noho izany, ry lanitra sy ianareo izay monina ao aminy! Nefa lozan'izay ny tany sy ny ranomasina; fa ny devoly dia nidina ho aminareo sady manana fahatezerana lehibe, satria fantany fa kely sisa ny androny. "Martin Luther Nihira sy nilalao tamin'ny 1529 noho ny voalohany ny tena noforonin'ny eritreritra hira," mahery vaika Fortress Andriamanitsika "(No. 237 ao amin'ny soedoa hymnal):" Prince ny haizina midina mandrahona sy tezitra, dia manomana förvisst loza sy argan mitete ... "dia toa efa ho toy ny zanak'Andriamanitra ao amin'ny masina asa, dia any amin'ny ady ara-panahy miaraka amin'ny lavo lehibe anjely any an-danitra, ary ny vokatry ny fahotana ho amin'ny hoavy ny olombelona, ​​izay no hanaraka eo taorian'ny ny lasa - dia efa namela ny tenany tsy hita maso, ary faminaniana "maty"; ny Zanaka, ny Zanak'ondry no efa Losifera ny ady amin'ny fatiantoka eny amin'ny lanitra. Izy dia manomana förvisst loza sy argan esory ... "Toa efa ho toy ny zanak'Andriamanitra ao amin'ny masina asa, dia any amin'ny ady ara-panahy miaraka amin'ny lavo lehibe anjely any an-danitra, ary ny vokatry ny fahotana ho amin'ny hoavy ny olombelona, ​​izay no hanaraka eo taorian'ny ny lasa - efa efa nanao ny tenany tsy hita maso sy ny ara-paminaniana "hovonoina"; ny Zanaka, ny Zanak'ondry no efa Losifera ny ady amin'ny fatiantoka eny amin'ny lanitra. Izy dia manomana förvisst loza sy argan esory ... "Toa efa ho toy ny zanak'Andriamanitra ao amin'ny masina asa, dia any amin'ny ady ara-panahy miaraka amin'ny lavo lehibe anjely any an-danitra, ary ny vokatry ny fahotana ho amin'ny hoavy ny olombelona, ​​izay no hanaraka eo taorian'ny ny lasa - efa efa nanao ny tenany tsy hita maso sy ny ara-paminaniana "hovonoina"; ny Zanaka, ny Zanak'ondry no efa Losifera ny ady amin'ny fatiantoka eny amin'ny lanitra.
I Losifera dia izay azon'ny sy mifidy toy ny "any an-danitra" Ormväsendet, mampisambotra efatra sy nedkastanden na bortgåenden - mitombo ny faharesena ho an'ny tsirairay "dingana":
1. Mialà tany an-danitra tahaka ny anjely "Losifera": "Ary ilay dragona, dia ilay menarana ela, izay atao hoe devoly sy Satana, ary mitaona izao tontolo izao, dia nazera tetỳ an-tany, ary ny anjeliny koa niaraka nazera taminy." ( 12: 9)
2. Toy ny menarana avy tao amin'ny paradisa eto an-tany (hita maso anatin 'ny fanjakan' Andriamanitra, fa amin'ny voninahitra any an-danitra) - angamba raha Adama sy Eva dia nesorina izany. 3. Avy ny toeran'ny mpampanoa lalàna / Satana ho amin'Andriamanitra (tany amin'ny toerana tany amin'ny selestialy faritra), lehilahin'Andriamanitra, Joba (2: 7): "Ary ny mpampanoa lalàna / Satana nandeha niala tamin'ny Tompo, ka namely vay ratsy an'i Joba hatramin'ny faladianao ny tananao izy; ny tampon-dohany." io fiampangana avy any Up 12:10 mahazatra: "mpiampanga ny rahalahintsika efa nazera, izay andro aman-alina miampanga azy eo anatrehan'Andriamanitsika." Noho izany, "Ry Simona, ry Simona! Nanontany i Satana (nahazo na, transsexuelle hafa.) Hanasivana anareo toy ny vary. "(Lioka 22:31)" fa ny devoly fahavalonareo mandehandeha tahaka ny liona mierona, mitady izay afaka hihinana. "(1 Petera 5: 8) "Satana aza mampiova ny endriny ho tahaka ny anjelin'ny mazava." (2 Korintiana 11:14) 4. any amin'ny helo (Apokalypsy 20:10)
Mariho fa i Jesosy ihany koa no tafiditra amin'ny dingana efatra, ny fitambaran'ny mifanohitra, ny fitsanganana amin'ny maty, ary tsy mitsaha-mitombo fandresena sy voninahitra ho an'ny ambaratonga tsirairay:
1. Up avy any am-pasana (fasana) rehefa tamin'izay dia voatsindrin'ny Fanahy nitory ny fandreseny tao Kalvary izay (1 Petera 3:19). 2. nitsangana tamin'ny maty, ary avy tao amin'ny fasana: "Ary noho izany ny foko faly sy ny lelako faly, eny, na dia ny tena hitoetra amin'ny fanantenana fa tsy hamela ahy ao am-pasana, na aoka ny Iray Masinao ho tratry ny lo." (Asan'ny Apostoly 2:27). 3. Up amin'ny Ray noho ny fanomezam-boninahitra eo anatrehan'ny olona tonga taminy, "Hoy Jesosy taminy: (Maria Magdalena): 'Rör tsy haninona ahy; fa tsy mbola niakatra tany amin'ny Ray. Fa mandehana mankany amin'ny rahalahiko, ka lazao aminy hoe: Miakatra ho any amin'ny Raiko sy ny Rainareo, ho any amin'Andriamanitro sy ny Gud. ' "). (Jaona 20:17), tany am-boalohany amin'ny hariva ny andro izany dia mampiseho ny voninahitra an'i Jesosy ho an'ny mpianany, voahidy ny tenany, noho ny fahatahorany ny Jiosy (20:19). Misy, dia mampiseho azy ireo ny sårmärkta tanany roa sy ny tongony, ary ny lafiny nanindrona. Eto dia tsy nisy fanontaniana mba tsy hikasika azy. Ary valo andro tatỳ aoriana i Jesosy no nanasa ny mpianatra Thomas hametraka ny fanondrony eo ny tanany sy ny lafiny (20:27). 4. Ny niakarany ho any amin'ny Ray lafiny: "Izy nitondra azy (ny mpianatra) avy any Betania, dia nanandratra ny tànany ka nitso-drano azy." (Lioka 24:50) "Koa satria i Jesoa efa niteny taminy, dia nampiakarina ho any an-danitra, ary nipetraka eo an-kavanan'Andriamanitra 'Andriamanitra. "(Mk.16: 19)
Nahare sy nahita
Miaraka amin'ny malaza ratsy toetra sy tia tena toa tampoka bibilava ao amin'ny "ambanin'ny tany" Saha Edena. Ary jereonareo fa i Adama sy Eva dia samy nandre azy sy nahita ny menarana. Raha ny marina dia samy niteny izany mahitsy toerana. Ny fiteny ampiasaina ao amin'ny Paradisa, tsy fantatsika ny Baiboly. Mety ho manokana "paradisa teny" maty avy tsikelikely. Ny iray amin'ny fiteny angamba, toy araka ny voasoratra eo ny 1 Korintianina 13: 1: "Na dia miteny amin'ny olona sy ny anjely." Kanefa ihany koa naneho hevitra fa ny karazana nodimbiasany teny ho any amin'ny manaraka teny hebreo ny Jiosy olona toy ny voampanga, izay mety ho lasa zava-misy (na nanome Andriamanitra) amin'ny alalan'ny Sema zanak'i Noa (Semites), ny zanany lahy Ebera (Hebreo ), avy eo ny hevitra tatỳ aoriana Fahenina Abrahama, Isaka zanany, zanany lahy Jakoba (Israely),
Eto dia mahaliana ihany koa ny mahita fa taorian'ny Safodrano tamin'ny andron'i Noa niresaka rehetra eto an-tany iray ihany teny (1 Gen. 11). Rehefa nandresy lahatra ny fiteny, noho ny vahoaka fananganana ny Tilikambon'i Babela, ka tsy nisy olona nahatakatra ny hafa, dia ny toerana noho ny firongatry ny teny hebreo. Nieritreritra ny fahafahana iray hafa momba ny niandohan'ny ny teny hebreo, dia tsy Anarana Ebera (Heb. Ibrim) hatao raha tsy misy ny toerana Hebrona (Heb. Ivrit) izay Abrama tonga tany amin'ny tany Kanana. Ao anatin'ny Hebreo Jodaisma ortodoksa classed ho masina. Na dia ny Kristianina evanjelika te tia ny teny hebreo amin'izany lalana.
Asan'ny maizina "fiteny tsy fantatra"
Misy ventilated sy miverina ao anatin'ny Kristianisma momba an'i Satana hahatakatra rehefa ao amin'ny Fanahy Masina, miteny amin'ny fiteny tsy fantatra (teny grika. Glossolalia). Ny fanontaniana dia tsy afaka mahazo valiny mazava tsara. Milaza ny Baiboly fa tsy marina fa "miresaka zava-miafina," miteny amin'ny fiteny tsy fantatra dia adika amin'ny alalan'ny Fanahy Masina 'Andriamanitra. Araka ny voasoratra eo ny 1 Korintiana 14: 2: "Izay miteny amin'ny fiteny tsy fantatra dia tsy miteny amin'olona, ​​fa amin'Andriamanitra. Tsy misy olona mahafantatra azy, rehefa miresaka zava-miafina ny fanahiny. "Ankoatra izany, Romana 8: 26-27" Ary ny Fanahy Masina dia manampy antsika amin'ny fahalementsika. Fa tsy fantatsika izay tokony hivavaka ho an'ny, fa ny Fanahy no mifona ho antsika amin'ny sighs tsy misy teny, ary Ary Izay mandinika ny fo no mahalala izay hevitry ny Fanahy, satria ny Fanahy mivavaka ho an'ny olona masina, araka ny sitrapon'Andriamanitra. "
Fa raha tsy miresaka intsony ny zava-misy fa mety ho diso ny samy hafa fiteny. Mety hisy izany, ary matetika ny mitovy, ny kristianina mamela ny fahotan'ny hafa fitiavan-tena hifehy ny teny tamin'ny fiteny tsy fantatra. Nefa mazava ho azy fa afaka ihany koa ny demonia hery haka ny fitenenana amin'ny fiteny tsy fantatra, raha toa ka misy mpiodina amin'ny nonchalance, amin'ny tsirambina sy milalao vokatr'izany. Occultist miteny "amin'ny fiteny tsy fantatra" eo amin'ny natiora fivavahana, Satanists aza, vaovao-taona ny olona manao izany. Eny, na dia ao amin'ny fivavahana lehibe ny Taoisma, Bodisma sy Hindoisma, dia. Izany mitranga eo ambany fitarihan'ny demonia. Izany dia azo inoana fa tsy tanteraka ny alaina avy amin'ny rivotra, dia mety ho lasa tahaka an'i Bala-mpaminany an-tendrombohitra Karmela eo amin'ny ady ny Elia mpaminany: "Rehefa nisy tolakandro, dia nosamborin'ny ny (asan'ny maizina, ny fanamarihana.)-Paminaniana fahavinirana sy ny natao mandra-pahatongany ho amin'ny fotoana ny fanatitra hohanina. "(1 Mpanjaka 18:
Ny fotoana ny ratsy niseho tao amin'ny Sahan'i Edena tamin'ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy izy, dia tsy vitan'ny hoe bibilava ao amin'ny teny ara-panahy endrika, bibilava, nefa nalainy ary koa ara-batana fampiasana ny menarana tany an-biby. Losifera, i Satana, ny devoly, ilay dragona, leviatana, niseho teo amin'ny mitarehin-menarana, fa amin'ny koa izy nanana fihetsika marina. Nisy zavatra izay mety nanao azy mora kokoa ho an'i Adama sy Eva mba halaim-panahy. Avy eo Andriamanitra dia afaka hiatrika ny menarana, ny fihinanana sy ny mitarehin-menarana, dia vakio ny andinin-teny ao amin'ny 1 Genesisy 3:14: "Ary hoy ny Tompo Andriamanitra ny serpent'Eftersom no nanao izany, ianao ho voaozona mihoatra noho ny biby fiompy rehetra sy ny bibidia biby. Eo amin'ny kibo dia ianao handeha, sy ny tany no tokony mihinana raha mbola ianao fanoitra. ' "Toy ny andinin-teny avy amin'ny" reverb "angamba, ilay Mpanjaka Cobra afaka hitombo hatramin'ny enina metatra ny lavany, ary mifoha ny ampahatelon'ny lavany. Snake masim-bava mikendry ny bibilava, dia hitsangana. Any amin'ny faritra atsinanan'i misy zavatra ara-panahy miavaka yoga, traikefa - Kundaliniormen. Ny ara-panahy dia midika ihopslingrad bibilava handry teo amin'ny The anus ny olombelona. Nandritra misaintsaina, ny bibilava dia azo atao ny mitaingina eo aminy, ary nanomboka nifindra miakatra ao amin'ny misaintsaina sy manaraka manaraka ny hazondamosiko amin'ny alalan'ny fantsona ara-panahy rafitra, antsoina hoe meridians. Popular fa mampidi-doza saintsainina, no hanambarako.
Tena mihitsy mora kokoa ny mpivady tsy ho resin'ny ireo ny mpaka fanahy, dia ny snakelike niteny. Na nisy fahafahana ho an'ny biby sy ny olona ny alalan 'ny fiteny mifandray amin'ny tsirairay ao amin'ny Paradisa, dia afaka avy amin'ny teny manodidina na ny Baiboly, raha tsy izany tsy holazaina. Marina aloha fa nilaza ny ampondra ao amin'ny Baiboly tatỳ aoriana ny tantara Balama mpaminany, Izay nandalo ny lalana ny namadika tamin'ny Israely (4 Eksodosy 22). Fa ny andininy faha-28 hoe: "Dia nampahiratin'i Jehovah ny vavan'ny boriky, ka hoy ny Balaam'Vad no nataoko taminao, satria intelo nokapohina ahy?" Dia namaly ny boriky Balama: 'Efa nanao adala ahy! Raha nanana sabatra etỳ an-tanako aho, dia efa maty ankehitriny dig. 'Ny boriky tamin'i Balama: Tsy borikinao aho, anao ny fiainanao nitaingenanao hatrizay nanananao ahy ka mandraka androany? Ary mbola nampiasa aho mba hanao soa tokony ho azonareo? "Namaly izy hoe: 'Nej.'"
Ahoana izany koa ny fahaizany teny amin'ny hoavy soa aman-tsara ny fanjakana ny Isiraely, any amin'ny fifandraisana misy eo amin'ny olona sy ny biby, dia tsy mahazo taratasy mazava. Fa araka ny Isaia 11: 8, ny manaraka antsika saika hitranga fifandraisana ho lasa zava-misy: "Ny zaza dia hilalao amin'ny vipera lavaka, iray nisara-nono ny ankizy hanome tanana mba hanapoizina ny menarana ny maso." Indray alina tao amin'ny tanàna iray any Ogandà tamin'ny 1992, nifoha aho tamin'ny efitrano dity maizina ny dia re feo mientanentana sy ny karazan-tany any ivelany ny varavarana. Araka ny ela Nihatony, dia nanapa-kevitra ny hanandrana ka hiverina any tory. Ny maraina, Nianatra aho fa alina ny mpiambina mampiasa ny jiro efa hita fa tena poizina bibilava hankany ny efitranoko alalan'ny fanokafana eo amin'ny farany ambany ny varavarana Sill. Manana ny menarana eo amin'ny sary voavono.
Eny ary, ny asa fikarohana ho an'ny bibilava toy ny olona eo amin'ny fiainany - ary ny tena zava-misy ny fahotana, mahita tampoka fa i Adama sy Eva izy ireo "nitanjaka". Nisy zavatra ratsy dia zava-dehibe amin'ny ambaratonga rehetra nitranga, ny fanahy, saina sy ny vatana. Na ara-batana izy ireo izay vonona ho an'ny firaisana ara-nofo, izay mety hitarika ho amin'ny fampielezana ny olombelona. Fa izao nofo sy akaiky toa mbola nisy miaro ny karazana fahamasinana sy ny voninahitra avy amin'Andriamanitra, araka ny ohatra mamaky isika ao amin'ny 1 Genesisy 2:25: "Samy ny lehilahy sy ny vehivavy dia mitanjaka izy, ka nahatsapa tsy henatra eo anatrehan'ny samy izy." Adama sy Eva fotoana miafina avy amin'Andriamanitra tao amin'ny Saha Edena, dieny tsy mbola azo antsoina hoe ny ara-panahy / ara-pivavahana mpikatsaka miseho. Ary Andriamanitra no manomboka: "Fa ny Tompo Andriamanitra dia niantso an-dralehilahy ka nanao taminy hoe: 'Var moa ianao?'."
Na dia i Adama sy i Eva dia tonga eo anoloan 'Andriamanitra, ka izy ireo ihany no antsoina ho amin'ny fieren'ny menatra satria ny mitanjaka - ary avy eo dia nanome tsiny ny latsaka amin'ny tsirairay sy ny rehefa voafitaky ny menarana izany. Andriamanitra dia nanome azy akanjo hoditra, mba hanafina ny fitanjahan'ny ara-batana, tsy midika avy hatrany ka nandao na "fiarovana" ny ara-panahy fitanjahany. Fa ny zava-misy fa ny fahalavoana niteraka ny telo fitanjahanao. Rehetra ireo no lasa "nitanjaka", nesoriny ny akanjony, nafatotra, ary irery foana. Mifarana ny dingana amin'Andriamanitra "nampandeha an'i" Adama sy Eva avy tao Edena ka nataony änglakeruber "ao amin'ny atsinanana" mba hiambina ny lalana mankany amin'ny hazon'aina. Angamba mba hisorohana sy hiaro ny ankehitriny mora manota ny olona tsy hiditra ary miditra ny hazon 'aina, hihinanany ny vokatra sy hiaina mandrakizay - fa amin'ny unforgiven fahotana. Ary hametraka ny ara-panahy / fikatsahana ara-pivavahana nanomboka tamin'ny hamafin'ny feno. Fa ny olombelona voalohany dia ny miezaka mba hahita ny lalana miverina any amin'Andriamanitra izy ireo namoy ny Community. Ary ny toromarik'Andriamanitra tsy eo. Tsia, izao dia nanomboka ny hira ny asa lehibe. Baiboly àry no fizarana ny Baiboly: "Ny Tompo dia mijery eny an-danitra ny zanak 'olombelona mba hizaha na misy rehetra izay mahatakatra, misy izay mitady an'Andriamanitra." (Salamo 14: 2)
Mandritra izany fotoana izany i Adama sy Eva fa mety hiala amin'ny Paradisa, na mandady rivotra avy koa ny menarana. Ary niditra izy, fa nandady nivoaka. Fa tsy midika fa nanjavona avy ny nahariana an 'Andriamanitra na ny olombelona. Angamba lasa ratsy reptilian (ny lat. REPTILIS, "mandady") voaroaka avy any Paradisa kely eo anatrehan'ny mpivady, ary niandry azy teo ivelan'ny amin'ny lolompo sy ny fakam-panahy vaovao. Paoly nanoratra fampitandremana ho an'ny Korintiana (2 11: 3): "Fa izaho matahotra fa tahaka ny menarana tamin'ny hafetseny namitaka an'i Eva, ka tokony ny sainareo ho simba nivily niala tamin'ny mikraoskaopy fanoloran-tena marina sy madio ho an'i Kristy."
Izany dia Tamin'io fotoana io fa ny fikatsahana ara-panahy lehibe mipoitra ho an'ny olombelona. Maniry ny "Paradisa very" ho feno fiombonana amin'Andriamanitra indray, sy ny vokany maharitra eo amin'ny olona, ​​dia hita amin'ny ho avy, ohatra, Ecclesiastes ny teny (3:11): "koa ny mandrakizay, dia efa nataony tao am-pon'ny olona. Anefa ka tsy mahalala ny asan'Andriamanitra, hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. "
Ny fivavahana vola, miaraka na tsia amin'ny asan'ny maizina mivantana singa, niandry an'i Adama sy i Eva, rehefa tonga avy tany Paradisa kijana. "Fampianaran'ny demonia" (1 Tim 4: 1), ny fahadisoana isan-karazany, izay tonga eny "seranan-tsambo" avy any atsinanana mijoro saka sy ny alika. Ny lahimatoa, i Kaina mpikatsaka ara-pivavahana, dia diso an'Andriamanitra, tahaka ny tamin'ny heriny ny menarana dia aoka ny tenany ho voafitaka hamono zavatra hatao fanatitra ho an'Andriamanitra amin'ny fomba diso sy egotrippat. Raha ny zandriny lahy Abela mamonjy ny fanatitra ho an'Andriamanitra, toy ny natao teo amin'ny finoana an'Andriamanitra, ary natao tao amin'ny fomba marina sy manetry tena. Vokatr'izany, dia Andriamanitra nanaiky ny fanatitr'i Abela fa tsy i Kaina ny, izay kosa nitondra an'i Kaina ny ratsy famindrana namono ny rahalahiny. Ao amin'ny 1 Jaona 3:12 izany zava-nitranga dia niakatra toy ny ohatra manokana, izay tsy mba ho tahaka an'i Kaina, "izay ny ratsy, ary namono zaza iray ny rahalahiny. Ary nahoana no namono azy Kaina? Eny ary,
Tahaka ny fanoharana momba ny very / zanaka adala nitondra toy ny lahatsoratra Illustration - ny anankiray ho mahandro sakafo - ny fahalavoana tao amin'ny Saha Edena sy ny corollary izany, dia azo lazaina fa ny zanany dia voatarika ho "tsy voafehy ny fiainana sy nandanilany foana ny fananany." Nanaraka izany izy, toy ny tonga mosary mafy ny tany, nanolotra ny tenany sy ny sinker ho andevo ny kisoa tompon'ny tany, fara faharatsiny, mba hahazo zavatra hohanina, fa na dia ny kisoa sakafo, dia nandray. Kisoa tompony, izay ihany koa ny mpanompo mpamily, dia ny sary fotoana Mitovy amin'ny Belzeboba, "ny lohan'ny demonia (kisoa, ny fanamarihana.)" (Matio 12:24).
SEARCH famonjena 'ny Tompo
Ao amin'io zava-misy ara-panahy ihany koa, isika amin'ny maha olona amin'izao fotoana izao. Enga anie isika eo amin'ny fifidianana eo amin'ny villoläriga sy ny fahamarinana, ny tsara sy ny ratsy, na ny amin'ny fahotana sy ny fahamarinana - misafidy ny tsara, misafidy ny tsara, mifidy izany izao. Aza mivily hanaraka tsy finoana an'Andriamanitra, evolutionism, hevitra maha olona sy ny asan'ny maizina. Fa mitady ihany ny Tompo, ilay Mpamorona sy Mpamonjy marina sy be fitiavana "face": "Ireo izay mitady Ahy izy ireo hahita ahy." (Ohabolana 8:17) "Ireo izay mikatsaka ny Tompo izy ireo hahatakatra ny zava-drehetra." (Ohabolana 28: 5) "Search aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany. "(Matio 6:33)" mpamory hetra sy ny mpanota nanao ny lalana an'i Jesosy. "(Lioka 15.1)" Diniho aho, azonao ho velona. "(Amosa 5: 4)" ny Tompo tsara ny fanahy mitady azy. "" izy mamaly soa an'ireo mitady azy. "(Hebreo 11: 6)
Faranako ny famaritana araka ny Baiboly, fa izay be dia be ny fahotana, izay ny fikorianan'ny 'Andriamanitra frälsningsnåd bebe kokoa. Lavo sy ny vokany Mahatsiravina sy lalina. Fa miasa amin'ny alalan'ny famelan-keloka ny Zanaka, ny Tompo Jesosy, dia vao mainka tena tsara ary lalina ny famolavolana sy ny fikasany. Ny zava-nitranga tamin'i lehibe, fa ny famerenana amin'ny laoniny no lehibe, ny lehibe izy. "Ny marina (Jesoa) izay hahatonga anareo tsy ho andevo." (Jaona 8:32) "Raha ny Zanaka no hahafaka anareo, ianao tena maimaim-poana." (Jaona 8:36) "Ao Aminy no ananantsika fanavotana (ny ratsy) ary manana dia ny famelana ny fahotantsika. "(Kolosiana 1:14) I Jesosy no lasa" ny fahamarinana "(1 Kor 1:30) eo anatrehan'Andriamanitra.
Ny famelan-keloka sy ny fampihavanana niteny taminy teo am-dralehilahy ny fiovam-po, mitranga mivantana amin'ny vavaka amin'ny anaran'i Jesosy izany: Tonga soa eto an-trano, amin'ny teny hafa! Herin 'ny filazantsara, dia hanao zavatra stepwise, dingana-tahaka, ka ho feno avy amin'ny famerenana amin'ny laoniny maizina, ratra, mihoatra noho ny tanana, fiankinan-doha - inona no fahotana depredations nanambady sy efa nahatonga. Nitory i Petera ao amin'ny Asan'ny Apostoly 2:40 amin'ireto teny ireto: "Aoka hanafaka anareo amin'ny hitranga anefa izany (efa nivadika / ratsy) taranaka." Ny fitorian'i Paoly ao amin'ny Asan'ny Apostoly 17:30 fa izao no andro hibebaka amin 'ny ara-panahy / ara-pivavahana "tsy fahalalana". Ento eny an toy ny endriky ny "very / zanaka adala 'hiverina any amin'ny Ray:" Ary nitsangana izy ka nandeha an-tongotra (fikarohana an-trano) amin-drainy. "(Tsy fantatsika momba ny zava-nitranga, rehefa ny, dia tonga tamin'ny fanandevozana tany kisoa tompony. ) ny Ray kosa dia efa nivoaka ka nijery ny zanany; fa izay rehetra mba tsy fantatray. Fa farany, mba hahita ny "fibebahana" lahy avy lavitra, izay toerana kisoa emboka, shabby sy narefo ny tonga niely teny an-dalana an-trano: "Raha mbola lavitra, dia tazan-drainy, ary onena azy. Ny ray dia nihazakazaka nitsena azy, namihina ny vozony sy nanoroka azy. "
Roa andinin-teny eo amin'ny teboka mamely eto, amin'ny lafiny iray, ny Jakoba 3: 8: "Manatòna an'Andriamanitra, dia hanatona anareo izy." Ary amin'ny lafiny iray hafa, ny Apokalypsy 3:20: "Indro, efa mitsangana eo am-baravarana Aho ka mandondòna. Raha misy mihaino ny feoko ka mamoha ny varavarana, dia hiditra ao aminy sy hiara-misakafo aminy, ary izy amiko. "Anaka, fibabohana ny fahotana," Efa nanota aho, "ary ny zavatra ilain'ny tsy manam-paharoa fahasoavana," Izaho tsy mendrika ny ho hoe zanakao ", mitarika ho amin'ny dingana maro ao amin'ny dingana hemkomstens:" Fa ny rainy kosa nanao tamin'ny mpanompony: faingana mba hamoaka ny tsara indrindra lamba sy ampiakanjoy azy ary asio peratra ny tànany sy kapa ny tongony! Ary hahazo ny zanak'omby nafahy ka vonoy; ary aoka isika hihinana sy hifaly. Fa zanako ity efa maty fa velona indray, ary efa very fa hita indray. Ary nanomboka ny antoko. "Avy amin'ny maizina ho amin'ny mazava, ny lohan'ny bibilava no efa akaiky ho tanteraka ny torotoro fo (Roma 16:20). Tsy ho ela i Satana näpsas mandrakizay. Fanahy ratsy dia farany foana nitondra fitaovam-piadiana. Fa anjely lavo tsy misy famonjena. I Satana sy ny mpanohana ireo tsikelikely mankany amin'ny helo. Fa ny olona izay manam-pinoana, ny finoana amin'ny fomba efa mba niverina tany Andriamanitra, ary afaka milaza tahaka an'i Paoly ao amin'ny 2 Timoty 1: 2: "Fantatro Izay inoako." Ary Romanina 8:16: "Ny Fanahy miara-milaza amin'ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika amin'Andriamanitra." Isika dia "fety vahoaka, ny fiangonana, dia ny lahimatoa izay manana ny anarana voasoratra any an-danitra" (Hebreo 12:23). "Fa hianareo kosa dia taranaka voafidy, sady mpisorona no mpanjaka, firenena masina, rakitra soa hitory ny be voninahitra nataony Ilay niantso anareo hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga." (1 Petera 2: 9) Tsy ho ela i Satana näpsas mandrakizay. Fanahy ratsy dia farany foana nitondra fitaovam-piadiana. Fa anjely lavo tsy misy famonjena. I Satana sy ny mpanohana ireo tsikelikely mankany amin'ny helo. Fa ny olona izay manam-pinoana, ny finoana amin'ny fomba efa mba niverina tany Andriamanitra, ary afaka milaza tahaka an'i Paoly ao amin'ny 2 Timoty 1: 2: "Fantatro Izay inoako." Ary Romanina 8:16: "Ny Fanahy miara-milaza amin'ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika amin'Andriamanitra." Isika dia "fety vahoaka, ny fiangonana, dia ny lahimatoa izay manana ny anarana voasoratra any an-danitra" (Hebreo 12:23). "Fa hianareo kosa dia taranaka voafidy, sady mpisorona no mpanjaka, firenena masina, rakitra soa hitory ny be voninahitra nataony Ilay niantso anareo hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga." (1 Petera 2: 9) Tsy ho ela i Satana näpsas mandrakizay. Fanahy ratsy dia farany foana nitondra fitaovam-piadiana. Fa anjely lavo tsy misy famonjena. I Satana sy ny mpanohana ireo tsikelikely mankany amin'ny helo. Fa ny olona izay manam-pinoana, ny finoana amin'ny fomba efa mba niverina tany Andriamanitra, ary afaka milaza tahaka an'i Paoly ao amin'ny 2 Timoty 1: 2: "Fantatro Izay inoako." Ary Romanina 8:16: "Ny Fanahy miara-milaza amin'ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika amin'Andriamanitra." Isika dia "fety vahoaka, ny fiangonana, dia ny lahimatoa izay manana ny anarana voasoratra any an-danitra" (Hebreo 12:23). "Fa hianareo kosa dia taranaka voafidy, sady mpisorona no mpanjaka, firenena masina, rakitra soa hitory ny be voninahitra nataony Ilay niantso anareo hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga." (1 Petera 2: 9) I Satana sy ny mpanohana ireo tsikelikely mankany amin'ny helo. Fa ny olona izay manam-pinoana, ny finoana amin'ny fomba efa mba niverina tany Andriamanitra, ary afaka milaza tahaka an'i Paoly ao amin'ny 2 Timoty 1: 2: "Fantatro Izay inoako." Ary Romanina 8:16: "Ny Fanahy miara-milaza amin'ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika amin'Andriamanitra." Isika dia "fety vahoaka, ny fiangonana, dia ny lahimatoa izay manana ny anarana voasoratra any an-danitra" (Hebreo 12:23). "Fa hianareo kosa dia taranaka voafidy, sady mpisorona no mpanjaka, firenena masina, rakitra soa hitory ny be voninahitra nataony Ilay niantso anareo hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga." (1 Petera 2: 9) I Satana sy ny mpanohana ireo tsikelikely mankany amin'ny helo. Fa ny olona izay manam-pinoana, ny finoana amin'ny fomba efa mba niverina tany Andriamanitra, ary afaka milaza tahaka an'i Paoly ao amin'ny 2 Timoty 1: 2: "Fantatro Izay inoako." Ary Romanina 8:16: "Ny Fanahy miara-milaza amin'ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika amin'Andriamanitra." Isika dia "fety vahoaka, ny fiangonana, dia ny lahimatoa izay manana ny anarana voasoratra any an-danitra" (Hebreo 12:23). "Fa hianareo kosa dia taranaka voafidy, sady mpisorona no mpanjaka, firenena masina, rakitra soa hitory ny be voninahitra nataony Ilay niantso anareo hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga." (1 Petera 2: 9) "Ny Fanahy miara-milaza amin'ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika amin'Andriamanitra." Isika dia "fety vahoaka, ny fiangonana, dia ny lahimatoa izay manana ny anarana voasoratra any an-danitra" (Hebreo 12:23). "Fa hianareo kosa dia taranaka voafidy, sady mpisorona no mpanjaka, firenena masina, rakitra soa hitory ny be voninahitra nataony Ilay niantso anareo hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga." (1 Petera 2: 9) "Ny Fanahy miara-milaza amin'ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika amin'Andriamanitra." Isika dia "fety vahoaka, ny fiangonana, dia ny lahimatoa izay manana ny anarana voasoratra any an-danitra" (Hebreo 12:23). "Fa hianareo kosa dia taranaka voafidy, sady mpisorona no mpanjaka, firenena masina, rakitra soa hitory ny be voninahitra nataony Ilay niantso anareo hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga." (1 Petera 2: 9)
Vecka 29, onsdag 17 juli 2019 kl. 16:20